Gabdho ka tagay Kenya oo ISIS ku Biiray – Radio Daljir
Maajo 19, 2015 1:44 b 0
Talaado, May 19, 2015 (Daljir) — Salwa Abdalla iyo Tawfiiqa Dahir ayaa noqday gabdhihii ugu horreeyey ee Kenyaati ah oo si rasmi ahaan loo xaqiijiyo inay ku biireen Dagaalamayaasha Kooxda Daacish ee ka dagalanta dalalka Syria iyo Iraq.
Labada Gabdhood, oo 20-jirayaal ah ayaa muuqooda la waayey maalintii Arbacadda ee la soo dhaafay, kadib, markii ay ka soo laabteen Madaraso ku taalla Xaafadda South C ee magaalladda Nairobi.
Fiidnimaddii Axadda ee la soo dhaafay ayey Salwa Abdalla iyo Tawfiiqa Dahir waxay la soo xiriireen qaar ka mid ah Ehelladooda, una sheegeen inay ku sugan yihiin gudaha dalka Syria.
Mid ka mid ah Gabdhahaasi oo Aaladda Wada-sheekeysiga Shabakadaha ay Bulshadda kula xiriirtay ehelkeeda ayaa sheegtay inay ka gudbeen xuduudka dalka Syria.
Hooyo Raxma Aadan oo dhashay Towfiiqa Daahir ayaa sheegtay inay ka walaacsan yihiin inay gabdhahaasi ku biiraan Kooxda Daacish.
Maamadda oo iyadoo ku sugan Mandhera la hadashay Wargeyska The Standard ayaa sheegtay inay gabadheeda maalin kasta la hadli jirtey, balse aysan la hadlin wixii ka dambeeyey Arbacadii la soo dhaafay oo ah maalintii ay labada gabdhooda u safreen dalka Syria.
Sidoo kale, Hooyo Khadija Abdalla oo dhashay Salma Abdalla, ayaa u sheegtay Wargeyska The Standard inay gabadheeda ahayd qof aan socod badnayn, xitaa ma aadi jirin goobaha laga soo dukaamaysto.
Waaxda Boliska Kenya ugu qaabilsan La-dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisadda (ATPU) ayaa rajo ka muujiyey in la heli doono labada gabdhood Labada gabdhood ee ku biiray Dagaalamayaasha Daacish.
Salma Abdalla iyo Towfiiqa Dahir waxay ahaayeen ardayda dhigata Jaamacaddaha The University of Nairobi iyo Jamaacadda Kenyatta University